တန်ဖိုး အနည်းဆုံး Flagship စမတ်ဖုန်း (သို့မဟုတ်) Mi 8 – DigitalTimes.com.mm
၅သိန်း ဝန်းကျင်ထဲက Mid-range စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးလောက် ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေတာလား ?
မဝယ်သေးပါနဲ့။ ၁သိန်းခွဲလောက် ထပ်စိုက်ပြီး Flagship စမတ်ဖုန်းကို ဝယ်ကိုင်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်မှာ မရှိတော့ရင် သူများဆီက ချေးပြီး ဝယ်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ ပြန်ဆပ်ချင်ဆပ် မဆပ်ချင်နေပေါ့။
ကျွန်တော် ဒီတပတ် Phone for you ကဏ္ဍအတွက် ရွေးချယ်ပေးချင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းကတော့ Flagship စမတ်ဖုန်းတွေထဲကမှ ဈေးအနည်းဆုံး စမတ်ဖုန်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်….Mi 8 ပါ။ Flagship စမတ်ဖုန်းကို ဝယ်ကိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ သူတွေထက် ၅သိန်း ဝန်းကျင် Mid-range စမတ်ဖုန်းကို ဝယ်ကိုင်မယ့် သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရွေးချယ်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Xiaomi Mi 8 ရဲ့ Specification တွေက ၁၀ သိန်းကျော်၊ ၁၀ သိန်း ဝန်းကျင် ပေးနေရတဲ့ Flagship စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ Specification တွေနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ကွာလဲ မတိမ်း မယိမ်းပေါ့။ ကင်မရာ သုံးလုံး ပါတယ်တို့၊ Display Resolution ပိုမြင့်တယ်တို့တော့ လိုက်မယှဉ်နဲ့ ပေါ့ဗျာ။ သေချာတာကတော့ Xiaomi Mi 8 မှာ Snapdragon 845, Adreno 630 GPU, RAM 6GB, ROM 128GB, Rear Camera 12+12MP နဲ့ Front Camera 20MP တွေပါဝင်မှာပါ။ ဒီ Specs တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို ကိုယ့်မှာ ၆သိန်းခွဲ ရိုရုံနဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Xiaomi ရဲ့ Flagship စမတ်ဖုန်းတွေက ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ဈေးနည်းနေရတာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ အချက် ဖြစ်လာပါပြီ။ ရှင်းပါတယ်။ Xiaomi က Marketing အပိုင်းမှာ သုံးရမယ့်ငွေတွေကို မသုံးဘဲ စမတ်ဖုန်းကို ဈေးလျော့ပြီး ရောင်းလိုက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi လိုမျိူး စမတ်ဖုန်းတွေကို ဈေးလျော့ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ OnePlus ပါ။ အခုနောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားတဲ့ OnePlus6ရဲ့ RAM 6GB, ROM 64GB ပါဝင်တဲ့ မော်ဒယ်ကလည်း တန်ဖိုးငွေ ၆၉၀၀၀၀ ကျပ်သာ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ OnePlus6ရဲ့ RAM 6GB, ROM 64GB မော်ဒယ်ဟာ ၆သိန်းခွဲဘဲ ရှိမယ်ဆိုရင် OnePlus6ကို ရွေးချယ်မိမှာ အမှန်ပါဘဲ။
တနျဖိုး အနညျးဆုံး Flagship စမတျဖုနျး (သို့မဟုတျ) Mi 8
၅သိနျး ဝနျးကငျြထဲက Mid-range စမတျဖုနျး တဈလုံးလောကျ ဝယျဖို့ စဥျးစားနတောလား ?
မဝယျသေးပါနဲ့။ ၁သိနျးခှဲလောကျ ထပျစိုကျပွီး Flagship စမတျဖုနျးကို ဝယျကိုငျလိုကျပါ။ ကိုယျ့မှာ မရှိတော့ရငျ သူမြားဆီက ခြေးပွီး ဝယျလိုကျပါ။ ပွီးမှ ပွနျဆပျခငျြဆပျ မဆပျခငျြနပေေါ့။
ကြှနျတျော ဒီတပတျ Phone for you ကဏ်ဍအတှကျ ရှေးခယျြပေးခငျြတဲ့ စမတျဖုနျးကတော့ Flagship စမတျဖုနျးတှထေဲကမှ စြေးအနညျးဆုံး စမတျဖုနျးလေးဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ….Mi 8 ပါ။ Flagship စမတျဖုနျးကို ဝယျကိုငျဖို့ စဥျးစားနတေဲ့ သူတှထေကျ ၅သိနျး ဝနျးကငျြ Mid-range စမတျဖုနျးကို ဝယျကိုငျမယျ့ သူတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီး ရှေးခယျြပေးရခွငျး ဖွဈပါတယျ။
Xiaomi Mi 8 ရဲ့ Specification တှကေ ၁၀ သိနျးကြျော၊ ၁၀ သိနျး ဝနျးကငျြ ပေးနရေတဲ့ Flagship စမတျဖုနျးတှရေဲ့ Specification တှနေဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ကှာလဲ မတိမျး မယိမျးပေါ့။ ကငျမရာ သုံးလုံး ပါတယျတို့၊ Display Resolution ပိုမွငျ့တယျတို့တော့ လိုကျမယှဥျနဲ့ ပေါ့ဗြာ။ သခြောတာကတော့ Xiaomi Mi 8 မှာ Snapdragon 845, Adreno 630 GPU, RAM 6GB, ROM 128GB, Rear Camera 12+12MP နဲ့ Front Camera 20MP တှပေါဝငျမှာပါ။ ဒီ Specs တှနေဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ဖုနျးတဈလုံးကို ကိုယျ့မှာ ၆သိနျးခှဲ ရိုရုံနဲ့ ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ Xiaomi ရဲ့ Flagship စမတျဖုနျးတှကေ ဘာလို့ ဒီလောကျတောငျ စြေးနညျးနရေတာလဲ ဆိုတာ စဥျးစားစရာ အခကျြ ဖွဈလာပါပွီ။ ရှငျးပါတယျ။ Xiaomi က Marketing အပိုငျးမှာ သုံးရမယျ့ငှတှေကေို မသုံးဘဲ စမတျဖုနျးကို စြေးလြော့ပွီး ရောငျးလိုကျလို့ ဖွဈပါတယျ။ Xiaomi လိုမြိူး စမတျဖုနျးတှကေို စြေးလြော့ရောငျးတဲ့ ကုမ်ပဏီ တဈခု ရှိပါသေးတယျ။ OnePlus ပါ။ အခုနောကျဆုံး ထှကျရှိထားတဲ့ OnePlus6ရဲ့ RAM 6GB, ROM 64GB ပါဝငျတဲ့ မျောဒယျကလညျး တနျဖိုးငှေ ၆၉၀၀၀၀ ကပျြသာ ရှိပါတယျ။ တကယျလို့ OnePlus6ရဲ့ RAM 6GB, ROM 64GB မျောဒယျဟာ ၆သိနျးခှဲဘဲ ရှိမယျဆိုရငျ OnePlus6ကို ရှေးခယျြမိမှာ အမှနျပါဘဲ။